Ahịa Ọdịnaya bụ Nhazi nke Mmezi na Okike | Martech Zone
Ka anyị na-enyocha isiokwu na Martech Zone dee banyere, anyi na-eme nyocha banyere ewu ewu ha yana ọdịnaya nke ebiela ebi. Ọ bụrụ na anyị kwenyere na anyị nwere ike imelite isiokwu ahụ ma gbakwunye nkọwa ndị ọzọ bụ isi maka isiokwu ahụ - anyị na-ewere ọrụ nke ide ya n'onwe anyị. Ọ bụrụ na anyị kwenyere na anyị nwere ike ịkọwa isiokwu karịa site na onyonyo, eserese, nseta ihuenyo ma ọ bụ vidiyo - anyị ga-ewere ya.
Ezigbo ihe atụ nke a bụ nhazi mmeghachi omume. Anyị na-agụ ụda nke isiokwu n'ebe ahụ - enweghị ụkọ! Agbanyeghị, mgbe anyị chọpụtara na anyị nwere ike iwepụta vidiyo nke kọwara ya nke ọma, otu isiokwu rụtụrụ aka na uru ya, yana infographic anyị nwere ike ịkekọrịta na onye ọzọ kere… anyị maara na anyị nwere onye mmeri.
Ntughari anyi abughi nani ide, o bu ịkekọrịta ọdịnaya kachasị mma anyị nwere ike ịzụlite. Ma ọ bụrụ na ị na-eso Martech Zone on Twitter, Facebook, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ, ị ga-ahụ na anyị na-ekerịta ọtụtụ ọdịnaya sitere na saịtị ndị na-asọ mpi anyị maka ndị na-ege anyị ntị. N'ihi gịnị? Maka na ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịrụ ọrụ ka mma ịkọwa ya, gịnị kpatara na ị gaghị agbakwunye ndị na-ege anyị ntị uru site na ịkekọrịta ọdịnaya dị ịtụnanya nke ndị ọzọ?
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta wiil ka mma, egbula ya… kesaa nke kachasị mma maka ndị na-ege gị ntị! Ọ bụrụ n ’ị nwere ike chepụta wiilị ka mma - gaa maka ya! Iguzozi nke ihe edozi na nkekọrịta n’akụkụ nke ọdịnaya etinyere gị ga-eweta nsonaazụ dị mma karịa naanị ọdịnaya ị mepụtara. Nke a infographic si Rebuild Nation na-akọwa ihe kpatara ya.
Tags: mmepụta ihenchịkọta ọdịnayanhazi ọdịnaya